Fironana efatra amin'ny varotra E-varotra tokony horaisinao | Martech Zone
Alatsinainy 4 Febroary 2019 Alarobia, Oktobra 28, 2020 Laura Himmer
Ny indostrian'ny e-varotra dia andrasana hitombo hatrany amin'ny taona ho avy. Noho ny fandrosoan'ny teknolojia sy ny fiovan'ny safidin'ny mpanjifa dia sarotra ny mitazona ny fiarovana. Ireo mpivarotra ambongadiny izay ampy fitaovana amin'ny fironana farany sy ny haitao farany dia hahomby kokoa raha oharina amin'ireo mpivarotra antsinjarany. Raha ny tatitra avy any Statista, ny vola miditra amin'ny varotra e-varotra eran-tany dia hahatratra $ 4.88 trillion amin'ny 2021. Noho izany, azonao an-tsaina ny hafainganan'ny fivoaran'ny tsena amin'ny teknolojia sy ny fironana farany.
Ny fiatraikany amin'ny fivarotana sy ny varotra e-varotra
Ireo mpivarotra enta-mavesatra amerikana dia eo am-pitaovana hanidy fivarotana hatramin'ny 25,000 amin'ity taona ity noho ny valanaretina coronavirus mampiakatra ny fahazarana miantsena. Izany dia mihoatra ny avo roa heny amin'ireo fivarotana 9,832 izay nakatona tamin'ny taona 2019, hoy ny Coresight Research. Hatramin'ity taona ity, ny gadra amerikana lehibe dia nanambara fanidiana maharitra mihoatra ny 5,000.
Miaraka amin'ny tahotra ny valanaretina, ny fanidiana hiditra ao an-toerana dia nanafaingana ny fifindran'ireo mpanjifa mba hividy an-tserasera. Ireo orinasa izay niomana na nifindra faingana tamin'ny varotra an-tserasera dia niroborobo nandritra ny areti-mandringana. Ary tsy azo inoana fa hihemotra mankany aoriana io fiovan'ny fitondran-tena io rehefa hisokatra indray ny fivarotana antsinjarany.
Andao jerena ny sasany amin'ireo fironana e-varotra miseho izay tokony harahinao.
The Tatitry ny e-Varotra e-varotra Merchant 2018 nahita fa 16.4% amin'ireo orinasa ecommerce no mampiasa fandefasana entana avy amin'ny fivarotana an-tserasera 450. Drop fandefasana modely mahomby hampihenana ny vidin'ny lisitra ary hampitombo ny tombom-barotrao. Ireo orinasa manana renivohitra kely dia mahazo tombony amin'ity maodely ity. Ny fivarotana an-tserasera dia miasa eo afovoan'ny mpamatsy sy ny mpividy.
Amin'ny teny tsotra, ny marketing sy ny fivarotana dia ataonao raha ny fandefasana kosa dia ataon'ny mpanamboatra mivantana. Noho izany, manangona vola amin'ny fandefasana ianao ary koa amin'ny fitantanana ny lisitra fivarotana na ny vidin'ny fikirakirana.
Amin'ity maodely ity dia manana risika kely kokoa sy tombony tsara kokoa ny mpivarotra antsinjarany satria hividy ny vokatra ianao aorian'ny nametrahan'ny mpanjifanao baiko. Ary koa, mampihena ny vidin'ny overhead izy io. Ireo mpivarotra e-commerce izay efa mampiasa ity fomba ity ary manao fahombiazana lehibe dia ny Home Depot, Macy's ary vitsivitsy hafa.
Orinasa an-tserasera izay mampiasa fandefasana fandefasana entana dia miaina fisondrotana fidiram-bola 32.7% ary manana tahan'ny fiovam-po 1.74% amin'ny taona 2018. Amin'ny taham-pandraharahana toy izany, ny tsenan'ny e-varotra dia hahita bebe kokoa ireo maodelin'ny fandefasana entana amin'ny taona ho avy.
Mora azo amin'ny ankamaroan'izao tontolo izao ny Internet, fa ny mpividy kosa mampiasa fantsona maro hiantsenana. Raha ny marina, araka ny Tatitry ny fividianana Omnichannel, manodidina ny 87% ny mpanjifa any Etazonia no ivelan'ny aterineto mpiantsena.
Ny 78% n'ny mpanjifa dia nilaza fa nividy tany Amazon izy ireo
45% ny mpanjifa nividy tamina magazay marika an-tserasera
65% ny mpanjifa nividy tamina magazay biriky sy feta
34% ny mpanjifa no nividy tamin'ny eBay
11% amin'ireo mpanjifa no nanao fividianana tamin'ny alàlan'ny Facebook, indraindray antsoina hoe f-varotra.
Raha jerena ireo isa ireo, ny mpiantsena dia eny rehetra eny ary aleony manana fidirana amin'ny vokatra amin'ny sehatra rehetra hahitan'izy ireo anao. Ny tombony amin'ny fanatrehana sy fidirana amin'ny alàlan'ny fantsona maro dia mety hanatsara ny orinasanao amin'ny fidiram-bola lehibe. Mihabetsaka ny mpivarotra an-tserasera no mivadika amin'ny fivarotana fantsona maro… tokony ho izany koa.
Anisan'ny fantsona malaza ny eBay, Amazon, Google Shopping, ary Jet. Ny fantsona media sosialy toy ny Facebook, Instagram, ary Pinterest koa dia manova ny tontolon'ny e-varotra miaraka amin'ny fangatahana mitombo.
Fianarana iray avy Baymard Institute nahita fa manodidina ny 70% ny sarety fiantsenana no nilaozan'ny 29% ny fandaozana nitranga noho ny fizotry ny fizaham-bola goavambe. Ny mpanjifanao, izay vonona tanteraka hividy, dia nanova ny sainy noho ny fizotrany (tsy ny vidiny sy ny vokatra). Isan-taona dia maro ny mpivarotra no very mpanjifa satria lava ny fividianana entana.
Amin'ny taona 2019, antenaina ny mpivarotra no miatrika an'io olana io amin'ny alàlan'ny fizahana mora sy ny dingana fandoavambola. Ireo mpivarotra an-tserasera dia handray dingana lavitra kokoa hanatsarana ny fizotran'ny fizaham-bokany hahatonga azy io ho azo antoka, tsotra ary mety kokoa ho an'ny mpanjifany.
Raha manana fivarotana an-tserasera mivarotra iraisam-pirenena ianao dia mahasoa ny fananana safidy fandoavam-bola eo an-toerana ho an'ny mpanjifanao manerantany. Ny fomba tsara indrindra dia ny fanamafisana ny fandoavanao vola amin'ny sehatra tokana, amin'ny fanomezana dingan-dàlana ho an'ny mpanjifanao manerantany.
Ny fikarakarana manokana ny mpanjifanao no lakilen'ny fahombiazana amin'ny orinasa rehetra. Amin'ny tontolon'ny nomerika, ny mpanjifa afa-po no tetikady marketing mahomby indrindra. Ny fahazoana isaky ny fantsona dia tsy ampy, mila manaiky ny mpanjifanao amin'ny sehatra tsirairay ianao ary manome azy ireo fitsaboana manokana mifototra amin'ny tantaram-piainany taloha taminao.
Raha mpanjifa nitsidika ny marikao tao amin'ny Facebook, ohatra, ohatra, dia mitsidika ny tranonkalanao dia omeo izany traikefan'ny mpanjifa izany raha ny fihaonana farany azon'izy ireo. Inona avy ireo vokatra nasehonao? Inona ny atiny noresahinao? Ny traikefa amin'ny fantsom-omni-channel tsy manam-paharoa dia handrisika ny firosoana bebe kokoa sy ny fifanakalozana.
Araka ny fanadihadiana iray natao tany Evergage, 27% monja amin'ireo mpivarotra no mandrindra ny antsasany na mihoatra amin'ny fantsona misy azy ireo. Amin'ity taona ity dia hahita fiakarana amin'ity isa ity ianao satria ny mpivarotra dia mifantoka bebe kokoa amin'ny tanjona kendren'ny AI hamantatra ny mpanjifany amin'ny fantsona samihafa. Ity dia iray amin'ireo fironana e-varotra malaza indrindra amin'ny taona 2019 izay tokony horaisinao.
Torohevitra ecommerce farany iray
Ireo no paikady e-varotra efatra malaza indrindra harahina amin'ny taona ho avy. Ny fijanonana havaozina amin'ny haitao no fomba tsara indrindra hitazomana ny orinasanao an-tserasera amin'ny ho avy. Afaka mandroso hatrany ianao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny filan'ny mpanjifanao. Aza hadino ny manadihady ny mpitsidika anao raha te hahalala ny fomba fampisehoanao amin'ny Internet. Ny fananana tamberina ara-potoana avy amin'ny mpanjifa sendra afaka manome anao fahitana lehibe momba ny toerana misy ny orinasa eo amin'ny tsena.
Tags: Amazoninstitiota baymardBigCommercefizotran'ny fizahanamitete ny fandefasanaEbayfizahana ecommercefironana ecommercefivarotana multichannelpersonalizationPinterest